Fitsirihana efa voaomana teny Manjakandriana : mitohy ihany ny “sinema” Razaimamonjy Claudine | NewsMada
Fitsirihana efa voaomana teny Manjakandriana : mitohy ihany ny “sinema” Razaimamonjy Claudine
Nampiandrasana hatramin’ny 11 ora antoandro, raha tamin’ny 8 ora maraina no tokony hiainga ho any Manjakandriana ny mpanao gazety, omaly, araka ny fanasan’ny minisiteran’ny Fitsarana. Hanao fitsirihana ny fonja ihazonana an-dRazaimamonjy Claudine ny antony. Fitsirihana efa voaomana sy tsy mazava anefa izany. Mitohy ihany ny ”sinema” Claudine.
Efa mipetrapetraka mialoha ny paikady nandrafetana ity sarimihetsika ity ? Nampiantsoina hijery ifotony any amin’ny fonjan’ny vehivavy any Manjakandriana momba ny famonjana ny tandapa Razaimamonjy Claudine ny mpanao gazety, omaly vao maraina be. Efa nampidinina ny soliky ny fiara avy amin’ny minisiteran’ny Fitsarana, tetsy Ambanidia, ary tokony ho nanainga tamin’ny 8 ora. Avy eo, nisy ny antso an-telefaonina ho an’ny mpamily fa mandalo eny Faravohitra aloha ny mpanao gazety. Nampiandrasina hatramin’ny 11 ora teo izy ireo ary tsy nisy fanazavana. Nisy rahateo fanomezan’ny masoivoho frantsay fitaovana informatika ho an’ny minisitera.
Tsy mahalala na inona na inona ny SG
Nilaza ho tsy mahalala io fidinana tany Manjakandriana io ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fitsarana (SG), Razafinjatovo Honré Parfait, rehefa nanontaniana taorian’izany fandraisana vahiny izany. “Tsy fantatro ny momba izany. Tsy aty aminay ny tompon’andraikitra misahana izany ary tena tsy mahalala ny fandehananareo any izany aho”, hoy izy. Tsy tao an-toerana koa ny minisitra ary tsy hita koa ny tale kabinetra nanazava. Tsy mba nisy tompon’andraikitry ny minisitera nanome toromarika amin’ny handehanana na tsia. Manjavozavo tanteraka. Tsy nisy fialan-tsiny amin’ny fampiandrasana mandritra ny ora maromaro. Samy namonjy ny asany, avy eo ny mpanao gazety rehefa tsy nahazo valin-teny mazava. Nantsoina indray anefa avy eo, fa hanainga hihazo an’i Manjakandriana ihany, rehefa tamin’ny 12 ora tany ho any. Midika izany fa efa milamindamina ny any amin’ny fonja vao nalefa hanainga ny mpanao gazety. Taitra noho ny inona koa ny minisitera ka nampiantso mpanao gazety hijery ny any an-toerana ?
Tonga tany Manjakandriana ihany ny mpanao gazety sasany hany nandeha rehefa nampiandrasina ora maromaro.
Salama tsara Razaimamonjy Claudine
Efa voaomana mialoha rahateo ny fitsidihana ka hita teo amin’ny fonjan’ny vehivavy tokoa Razaimamonjy Claudine. “Salama tsara aho… Mitovy amin’ny vehivavy voafonja rehetra ny fitantanana ahy ato”, hoy izy niresaka fohy tamin’ny mpanao gazety, tao am-ponja. Marihina fa tsy azo atao ny maka sary sy feo amin’ny fonja sady tsy mbola voaheloka rahateo ity tandapa ity. Nanazava ny anton’ny niantsoana mpanao gazety avy eo ny talen’ny fifandraisana eo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana, Napou Jeremie. “Hialana amin’ny resabe ny fandehanana aty izao. Io izy izao sy ny efitrano ihazonana azy. Tsy nivoaka tato izy ary miandry ny fitsarana azy… Hofain’ny fianakaviana ikarakarana ny sakafony ilay trano any ivelany”, hoy izy. Nataon’ny mpanao gazety tazan-davitra io trano, tokony 100 m miala ny fonja io. Samy nanana ny filazany ireo mponina manodidina. Niraisan’ireo nanontaniana ny filazana fa misy fiara 4×4 mainty mivezivezy eo amin’ny alina sy ny maraina. Ny hafa indray milaza fa misy fotoana Razaimamonjy Claudine, mihazo io trano manokana, ivelan’ny fonja, io.
Araka izany, tsy mazava intsony ny tian’ny mpitondra hahatongavana momba ity raharaha ity. Tsy mandehaleha ho azy ny nandrebirebena mpanao gazety ora maromaro taty Antananarivo vao nasaina niainga, ho any Manjakandriana. Mbola nisy fandaminana natao mialoha tany an-toerana. Sarimihetsika no betsaka !